ODEESSA SHIRA – WAL DHAQQABIISAA SHARE GODHA
Akkumaan dabree dabbree sochii deemaa jiruu fi gaaffii hundee Oromummaa irratti sochii deemaa jiru laalchisee waa jachaa turetti ammas sochii Qeerroo fi ummanni keenya itti dhumaa, hidhamaa fi itti hiraaraa jiru gara dabarsuuf shira deemaa jiru wal qaabsisuun barbaachisaa dha jedhee amana.
Dhiheenya kana sochiin kanneen lammummaa Ethiopia gaafanna, gaaffiin Oromoo abbaa biyyummaa osoo hin tahin dimocracy – kanneen akka afaan oromoo afaan biyyooleessaa tahu, filamuu fi filachuu faa jachaa turan fi ifaan ifatti gaaffiin Oromoo Bilisummaa miti jachaa jiran amma ammoo Arbanoch G7 dhaaba hiree murteefannaa ummatootatti hin amanne kan duraanu jala fiigani dadhaban akkasumas Oromoo addaan baasuun, kanneen kophee isaaniif xaragan akka OPDO ti jaarrachuu barbaadan waliin magaalaa DC keessatti oliifi gadi kaachaa jiru.
Gaddisiisaa fi kan eenyummaa jara kanaa garsiisu garuu, akka waan fincila deemaa jiru kana gaggeessaa jiranitti, akka waan bakka bu’oota Qeerroo fi ummataa fincilee tahanitti of dhiheessuu isaaniti. Kana bira dabree kan tokko itti du’aa, itti madaawaa fi hiraar argaajirutti yeroo eeggatani fincila deemaa jiruu fi sochii ummaticha murteessuu irratti angoo fi dandeeti akka qabanitti of dhiheessuu isaaniiti.
Gama kiyyaan gaaffiin Qeerroo fi ummataa sadarkaa qircannaa lafaa fi afaan oromoo kan biyyooleessaa tahuu bira taree gaaffii abbaa biyyummaa tahaa jira. Kanas dhaadannoolee akka “Oromoon tan Oromoo ti”, “Abbaan biyyaa oromoo dha”, “Oromoon biyya ofii irratti murteessuu dandayuu qabaa” fi … wkf. jachaa jiran mirkanii dha.
Duba jarri kun kan biroo hafee moral ground tokkollee kan hin qabne, kan yaanni isaani ummata biratti tufame tahuu osoo beekanuu fi wanni isaan ofaa jiran kanuma yaada isaani bakka bu’u malee gaaffii ummataa fi Qeerroo bakka hin buune tahuu otuu beekanu maaliif dhiiga Joollee teenyatti advantage fudhachuuf oliif gadi kaachaa akka jiran beekuun dilana nama hin dhibu – dhiiga ilmaan oromootinillee gurguratan aangoogo hawanniif sana argachuu dha.
Namni waan dabre irraa osoo hin baratin waanuma fakkaataa irratti daddeebi’aa oolu ofuu hogganuu dandayuu irratti gaaffii kaasa. Wayyaanee ummata keenya fixaa jirtu ittiin kadhachaa turanii fi qabsoon tuni hoggana keenya maee bakka gahuu hin dandeessu jachuu bira dabree kanneen QBO rakkoolee meeqa uumuun dadhabsaa turanii ammas itti jiran; amma ammoo kanneen akka waan Ficila kana ofsisaa jiranii fi bakkaas buuna jedhanii of agarsiisuuf akkasumas ifaajiifi dadhabii kan dhigallee gaafate kafalaa kanneen itti jiran akka waan hin jirretti lakkaawaa of dhaadheessaa jiran waliin tahani shira yaaduu jalqabuun hakka oromoo tokkotti hedduu na gaddisiisa. Garuu maal godhu, duraanu yaanni isaani tokko. Fedhiin isaanittiis akkuma fedheehu tahu carraa kanatti dhimma baanaa dha.
Carraa tokko tokkotti dhimma bahuun finciluma kanaahu akka himanii fi amanana kanneen dirqaman waan deemaa jiru kanatti odeessa kanneenuma hojjachaa jiran irraa fi karuma isaan tolchaniif irraan argatani dhimma itti bahani of dhaadheessuu jalqabuu bira taree ammanuutu gaggeessa kan jedhanii dhalachaa jiraachuun isaani ifa tahaa jira. Kan tokko hojjateen of himuu, kan tokko karaa saaqee irratti shira hojjachuuniis hedduu mul’achaa jira. Hunfaafuu, dirqamani malee shirri kun fedhiin sirnicha jiraachisuu ammallee kanneen irraa hin baane fi karaa dandayaniin bu’aa sochii FDG akkasumas tarkaanfii WBO dhooysuuf yaalan irraa kan madde tahuu isaa ifa tahuu qaba.
Kanneen Oromoo tahani falaasama ykn ideology hundee Oromummaa jibbu fi Arbanyooch G7 hiree murteeffannaa Umatootatti hin amanne waliin maqaa saboota hunda kakaasu jedhuun waan “Ximirat” jedhu tolfachaa jirra jedhanii kaachaa jiraniin gama kiyyaan itti hin milkooftan jachuu barbaada. Kanneen oromoon humna taatu malee mirga ofii gonfachuu akka hin dandeenye otuu beekanu shira hojjachaa jiran seenaaf dhiisuu qofa otuu hin tahiin ittis himuu dandayuun murteessaa dha. Xalayaa feetan nuutu bakka bu’a, sagantaan keenya kana, Ethiopia haala Somalia mudate irraa hanbisuu nutu dandaya jattani mootumoota angaawaniif barreesitanillee, kan dhugaa jirtu karaa birooniis barreessuu qofa otuu hin tahiin qaamaaniis ragaa qabatamaa fi furmaataan waliin itti hima ajiru kan biroos akka jiru dagachuun keessan hammam akka oftuulummaan deemtan nama garsiisa jedhaan.
Saboonni Cunqurfaman fi hiree ofii murteefachuu barbaadan walii galtee ummatani saboota isaani fincilaaf qopheessuu qofa otuu hin tahiin hujjiidhaaniis bakka takka takkatti mul’ataa waan tahe hojjachaa jiru. Gaaffiin, gaaffii abbaa biyyuumaa kan hiree ofii murteefachuu qofaan hikkamuu dha malee kadhaa fi sirna nama nyaataa tahe kana jiraachisani kadhaan waan bubuutu itti argatanii miti.
Ani gama kiyyaan saba tokkorraa rakkoo hin qabu. Wayyaaneen Oromoo qofa otuu hin tahiin saboota hunda akka maletti cunqursaa jirti. Waan taheef, Amaariniis fincilu, FDG deemaa jiru kanaas deeggaru nuuf bu’aa qaba. Keessaa fi Tigroota addaan fageessuu fi akka humna nurratti hin taane godhuun toftaa tokko – kanatti nan amana. Haatahu malee mal kenninaan gaaffii dha. Mirga heree murteeffannaa keenya kennuun kun argama ammoo natti hin fakkaatu. Ummanni keenya gabrummaan nu gahe jachaa jiraachuu isaa hubachuu dhabuu natti fakkaata. Kanumaafas keessaa fu yeroo ammaan tanaa keessatti gargaarsi ABO fi Qeerroof bakkayutti godhamaa jiru hammam takka akka ol ka’e fi kanneen hedduminaan qawwee bitaa jiran yeroo garru wanni isin yaaddan yoonuma sirnicha jiraachisuuf dhiiga Oromoo gadi naquuf qophii taatan malee irra of qussatan gaarii kan jedhu qaba.
Karaa biroon sochiin karaa WBO dhaan deemsifamaa jiruus akkaataa FDG karaa nagaan deemaa jiru kanaan wal hin faalleesine tokkotti deemaa jiraachuu beekuu qabna. Jarri amma “Ximirat” dhaabbanna jedhee kaachaa jiru, karaa biroon Arbanyochi G7 waraanaan deemu jabeessaa kaan ammoo akka hin dagayamneehu godhuu irratti fi xiqeessuu irratti kanneen bobahanii jiranii dha – kana maoo walumaan garra. Fincilli oromiyaa guutuu keessatti qabsiifamaa jiru kun Saboota hiree fakkaatoo fi fedhii fakkaatoo waliin qabnu keessatiis qabsiifamaa jira. Gaafas saba akka rabbitti sodaatan kana waliin iskistaa dhiituun waan isaan fiduu deemaniis walumaan arguuf deemna.
Hundaafuu, warri kun wareen Arbannpoch G7 waliin kaaba irraa ummata akka mililikitti Oromia lammada gabrummaa jala galchuuf yoo dhufanis mee numa laalla!!!!!!!! Akka kiyyatti garuu oromoo dhaaf abbaan fedhelleen hiree isaa murteessuufi hin dandayu. Ummanni eenyu akka bira dhaabbatee dhiiga gadi naqaa lafee cacabsaafi jiru ni beeka. Asumaa self-promotion dhaan anatu akkas godhaa na argaa na argaan kuni booda na dhooysaa akka fiddu gama kiyyaan shakkii hin qabu.
Kan biraa ammoo garii isaanirraa akka garutti odeessi karaa Qeerroon ergamus tahe karaa adda addaan dhufu media dhaaf akka tahutti malee akka isaan jedhanitti -Qeerroo nuutu hoggana,sochiin kun akkeeka ykn direction hin qabu nutu qajeelfama baasaa fi jira akka jedhani karaa lafa jalaan afuufanii fi afuufsisaniis ni beeka. Kan dhugaa beekuus itti koflaa jira. Dhugaan garuu, humna dandeetii isaanirra qabuu fi gurmaawee Fincila kana guutu Oromiyaa keessa qabsiiseetu jira. Ofiifuu dhagayani, akkuma Wayyaaneen rifattetti gariin rifatee, FDG kuniis akkuma tanaan duratti salphatti kasha jedhani xiinxala akka godhaa turan ni yaadatama. Amma dubbiin akka isaan yaadan akka hin taane arganii akkamitti kana irraa waa bufanna isa jedhutti saganteefachu jalqaban. Osoo isaan Oromummaa waakkachuuf yaalanii fi kadhaan kopheen irratti dhumtuu akkasumas Amaarri ofirraa ariinaan Oromoof kan dhaabbatan of fakkeessuuf yaalanu, humni kun finciloota dabre irraa barachaa sadrakaa kana gahee jira. Mee karuma isaan humna kana bira dabrani “ximirat” isaan ummatatti gadi baasan garra..
Ammaaf kanuma, shiroota sochii oromoo fi Qabsoo isaa irratti dhooysaan deemaa jiru itti fufaan saxiluun barbaachisaa dha. Fulduraaf barbaachisaa tahu maqaadhanillee ragaa waliin lafa kaayuun ni dandayama.